အများဆုံး 424 DNA ကိုအတု Anti-theft စာဝှက်စတစ်ကာများ, အများဆုံး 424 TT Tamper အထောက်အထားခိုးယူမှုစာဝှက်စနစ်တံဆိပ်
 » NFC ကိုထုတ်ကုန်များ
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ, စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် အများဆုံး 424 DNA Anti-counterfeiting Anti-theft Encryption Label, အများဆုံး 424 DNA ကိုအတု Anti-theft စာဝှက်စတစ်ကာများ, အများဆုံး 424 TT Anti-counterfeiting Anti-theft Encryption Label, အများဆုံး 424 TT Tamper အထောက်အထားခိုးယူမှုစာဝှက်စနစ်တံဆိပ်
chip: အများဆုံး 424 DNA/NTAG 424 TT
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ISO ကို 14443 TypeA
Eraser ကြိမ်: 100,000 ကြိမ်
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ: 10 နှစ်ပေါင်း
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20ကို C ~ + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
antenna အရွယ်အစား: diameter 23mm (with small tail), specifications can be customized
ပစ္စည်း: coated စက္ကူ, PVC, ပေ, ကို ABS, PC can be customized
Special process: လေးအရောင် offset ပုံနှိပ်ခြင်း, silk screen printing, consecutive numbers, QR codes တွေကို, စသည်တို့ကို.
အများဆုံး 424 DNA isalabel chip with advanced security and privacy that setsanew standard for secure NFC and IoT applications. The next generation of chips provides advanced security and privacy protection on attack-resistant certified chips.
High-end products are anti-counterfeiting, တမ်ပါ-အထောက်အထား, and anti-counterfeiting without the need to connect to the Web. Famous brands, luxury goods, jewelry, cosmetics, wine, famous paintings and antiques.
I am interested in your product NTAG 424 DNA ကိုအတု Anti-theft စာဝှက်စတစ်ကာများ, အများဆုံး 424 TT Tamper အထောက်အထားခိုးယူမှုစာဝှက်စနစ်တံဆိပ်
prev: NFC ကိုဖျ Silicon လက်ပတ်, NFC Intelligent Proximity Silicone Wristband
NFC ကိုဖျ Silicon လက်ပတ်, NFC Intelligent Proximity Silicone Wristband
RFID Crystal Epoxy Card ကို, NFC ကို Crystal Epoxy Tag ကို
custom NFC ကိုစတစ်ကာများ, ကော်စက္ကူနှင့် Ferrite အလွှာနှင့်အတူ NFC ကိုဆန့်ကျင်သတ္တု Tag ကို
NTAG စီးရီးခြောက်သွေ့တဲ့အင်းလေး, NTAG203 ခြောက်သွေ့သောအင်းလေး, NTAG213 ခြောက်သွေ့သောအင်းလေး, NTAG215 ခြောက်သွေ့သောအင်းလေး, NTAG216 ခြောက်သွေ့သောအင်းလေး
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (73)
anti-သတ္တု Tag ကို (27)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (18)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (28)